တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် နေအိမ်မှထွက်လာသည့် ကျောင်းသူတစ်ဦး ဓားဖြင့်ထိုးခံရ – Thutastar
Comments Off on တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် နေအိမ်မှထွက်လာသည့် ကျောင်းသူတစ်ဦး ဓားဖြင့်ထိုးခံရ
Sagaing park’s security to be tightened
Comments Off on Sagaing park’s security to be tightened
မြန်မာအမျိုးသမီးများ က​​လေးများများ မွေးဖို့လိုကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဋ္ဌေး ​​ပြော
Comments Off on မြန်မာအမျိုးသမီးများ က​​လေးများများ မွေးဖို့လိုကြောင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဋ္ဌေး ​​ပြော
ကမ္ဘာပေါ်က ဒုတိယအန္တရာယ်အရှိဆုံးမြို့စာရင်းဝင်လာတဲ့ ရန်ကုန် ???? ????????
Comments Off on ကမ္ဘာပေါ်က ဒုတိယအန္တရာယ်အရှိဆုံးမြို့စာရင်းဝင်လာတဲ့ ရန်ကုန် ???? ????????
Comments Off on အောင်ရဲထွေးသေဆုံးမှုမှ တရားခံ(၃)ဦးအား လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုတော့မည်
စိတ်ပူလိုက်တာရှင်… ပျောက်သွားတာ3ရက်ရှိပါပြီတဲ့.. သူ့မှာ ဘာရည်းစားမှလည်း မရှိပါဘူး..
Comments Off on Govt proposes MoU to UNDP and UNHCR to cooperate in government’s efforts in carrying out livelihood development for all communities in Rakhine State
အိမ်နဲ့ခြံအား သော့ခတ်တဲ့ ပဲခူးမြို့က ဖြစ်ရပ်– ဗွီဒီယိုဖိုင် ကြည့်ရန်
Comments Off on အိမ်နဲ့ခြံအား သော့ခတ်တဲ့ ပဲခူးမြို့က ဖြစ်ရပ်– ဗွီဒီယိုဖိုင် ကြည့်ရန်
Comments Off on Local and foreign investments create over 110,000 jobs in 2017-18 FY
သမီးရည်းစားတွေ နန်းမြင့်တောင်လယ်ဆရာတော်ကြီးက သတိပေးလိုက်ပြီနော်
Comments Off on သမီးရည်းစားတွေ နန်းမြင့်တောင်လယ်ဆရာတော်ကြီးက သတိပေးလိုက်ပြီနော်
ထီးတော်တင် ရင် နေပြည်တော် ရေလွှမ်း မည်ဟု တဘောင်ထွက်နေသည့် နေရောင်ပြအင်း စေတီ ထီးတော် တင်ပွဲ ကျင်းပ
Comments Off on ထီးတော်တင် ရင် နေပြည်တော် ရေလွှမ်း မည်ဟု တဘောင်ထွက်နေသည့် နေရောင်ပြအင်း စေတီ ထီးတော် တင်ပွဲ ကျင်းပ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားများ
Comments Off on နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားများ
Comments Off on “သမ္မတအသစ်ဘယ်လိုရွေးမလဲ “